Personal Development Programs | Breakthrough
သင့်ဘဝမှာ လုပ်ချင်ပါလျက်နဲ့ စွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေ ဘယ်နှစ်ခု လောက်ရှိလဲ။
တက်ကြွတဲ့ လုပ်ချင်စိတ်နဲ့ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ခဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်း စိတ်ဓါတ်ကျခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေရော ဘယ်နှစ်ခု လောက်ရှိလဲ။
အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းနဲ့ သိပ်မသေချာတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ဝင်လုပ်ခဲ့ပြီး ဘာတိုးတက်မှုမှ မရှိပဲ အချိန်ကုန်၊ ဘာပညာမှ မရ၊ စိတ်ဓါတ်တွေကျရပြီး ဘဝကို နောက်တစ်ခါ ပြန်ပြန် စရတဲ့ အဖြစ်တွေရော သင်ကြုံဖူးလား။
အဲဒီလိုလူမျိုးတွေရော သင့်အသိတွေထဲမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရှိလဲ။
ဒါတွေအားလုံးဟာ လုံလောက်တဲ့ သုံးသပ်မှုတွေ အားနည်းပြီး မသေချာ မရောရာတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အိပ်မက်တွေနဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ရာကနေ ရခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်တယ်။
သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို နောက်တစ်ဆင့်မြင့်အောင် လုပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်အလုပ်အကိုင်ကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် သင့်မှာ အနည်းဆုံး အိပ်မက်တစ်ခုတော့ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
အခုစာဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ တစ်နေရာမှာ ထိုင်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် မတ်တပ်ရပ်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် ဒီစာကို ဖတ်နေရင်းနဲ့ စဉ်းစားနေလိမ့်မယ်။
“လူတွေဘာဖြစ်လို့ အိပ်မက် မမက်ကြတာလဲ။”
လူတွေကို ပိုပြီး အနှစ်သာရရှိတဲ့ အိပ်မက်တွေ မက်ခြင်းကနေ လွဲချော်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း ၅ ခု ရှိတယ်။
၁။ အချို့သောသူတွေဟာ အခြားသူတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို စိတ်ပျက် အားလေ ျှာ့တတ်ကြခြင်း၊
လူတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို သူတို့ဆီကနေ ဆွဲထုတ်ခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ အိပ်မက်တွေကို ပျက်စီးစေသူတွေ၊ အိုင်ဒီယာတွေကို ပျက်သုန်းအောင် လုပ်သူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ဘာအိပ်မက်မှ မရှိတဲ့သူတွေဟာ တခြားလူတွေကိုလည်း အိပ်မက်မက်တာကို မလိုချင်ကြပါဘူး။ အခြားလူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ သူတို့ကို ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေခြင်း၊ မလုံခြုံစေခြင်း စတဲ့ ခံစားချက်များကို ရရှိစေပါတယ်။
သူတို့တွေထဲက တစ်ချို့ဟာ သင့်ဘဝမှာ အခုအခြေအနေထက် မြင့်တက်သွားပြီး အရေးပါ အရာရောက်တဲ့သူ ဖြစ်လာမှာကို မကျေမချမ်းနိုင်သူတွေ ဖြစ်နိုင်သလို တစ်ချို့ကတော့ သင့်ကို စိတ်ဓါတ်ကျရမှာ၊ နာကျင်မှုကို ကြုံရမှာကို စိုးရိမ်တာကြောင့် တားဆီးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်ကို အိပ်မက်မက်ခြင်းကနေ တားဆီးခံရပြီဆိုရင် ရင်ထဲမှာ မှတ်ထားပါ။ အိပ်မက်မက်တာကို စတင်ဖို့နဲ့ အဲဒီအိပ်မက်ကို ရရှိအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ နောက်ကျတယ်ရယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မရှိပါဘူး။
၂။ တစ်ချို့သူတွေဟာ အတိတ်က နာကျင်မှုတွေ၊ စိတ်ထိခိုက်စရာတွေကြောင့် အိပ်မက်မက်ခြင်းကို တားဆီးထားခြင်း၊
စိတ်ထိခိုက်တယ်ဆိုတာဟာ မေ ျှာ်လင့်ထားတာရယ် တကယ့်အဖြစ်အပျက်ရယ်ကြားက ကွာဟချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ မမေ ျှာ်လင့်ပဲ မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ရှိထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဖြစ်ချင်စိတ်တွေ မပြည့်ဝတာနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ကြရသလို မေ ျှာ်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားတာတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စိတ်ထိခိုက်ရမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ကို တော်တော်ကြီးကို နာကျင်စေပါတယ်။
တစ်ခုခု အမှားအယွင်း လုပ်မိပြီဆိုရင် ဒါကို နောက်တစ်ခါ မလုပ်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုး ကျွန်တော်တို့တွေ ပြောတတ်ကြတာကို သင်ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါဟာ ဘယ်လောက်တောင် မှားယွင်းလိုက်ပါသလဲ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ တော်တော်ကို မှားယွင်းပါတယ်။ ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာဟာ အောင်မြင်မှုကို ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ မလွဲမသွေပေးရမယ့် တန်ဖိုးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောသူတွေဟာ သူတို့အိပ်မက်တွေနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်လာဖို့ မတိုင်ခင်မှာ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကို မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။
၃။ အချို့သောသူတွေဟာ ပ ျှမ်းမ ျှလောက်ကို ရည်မှန်းတာ အကျင့်ပါနေတတ်ကြခြင်း၊
ရည်မှန်းချက်အိပ်မက်တွေကို ချမှတ်မယ်ဆိုရင် သာမန်လောက်အဆင့်ကနေ ကျော်ဖို့အတွက် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အစွမ်းကုန်ရုန်းကန်ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်အိပ်မက်တွေကို ရယူခြင်းနဲ့ သာမန်လောက်မှာ နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်းမှာ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အဲဒီ နှစ်ခုဟာ သဟဇာတမဖြစ်ပါဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ဟာ သာမန်လောက်ကို ချိန်ရွယ်ပြီဆိုရင်၊ အိပ်မက်မက်ဖို့ တော်တော်ကို လံှု့ဆော်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အခြားသူတွေကို အပြစ်တင်မယ်၊ အခြေအနေတွေကို အပြစ်တင်မယ်၊ စနစ်တွေ အပေါ်မှာ အပြစ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ့်တကယ်တမ်းမှာတော့ ပ ျှမ်းမ ျှလောက်သာ ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဟာ သင့်ရွေးချယ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်ဘဝဟာ သင်ဖြစ်ချင်တာထက် လျော့နည်းပြီး သာမန်လောက်ပဲ ဖြစ်နေပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ပိုပြီး အိပ်မက်တွေ မက်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ ငြိမ်းငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေ ဖောက်ထွက်ဖို့အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကို မက်တာလောက် ဘယ်အရာကမှ မကူညီနိုင်ပါဘူး။
၄။ အချို့သောသူတွေမှာ အိပ်မက်တွေကို ရယူဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ မရှိကြခြင်း၊
အိပ်မက်ဆိုတာဟာ ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ အဲဒီအိပ်မက်တွေဟာ သင့်အတွက် အသစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ၊ သင်ချစ်တဲ့သူတွေ၊ သင်လေးစားတဲ့သူတွေက သင့်အိပ်မက်တွေကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့အချိန်မျိုးမှာ၊ သင့်မှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်း မရှိသေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာ သင့်အိပ်မက်တွေဟာ အရမ်းကို စွန့်စားရတဲ့အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်အစစ်အမှန်ပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ယုံကြည်မှုရလာဖို့ဆိုရင် သင့်အိပ်မက်ကို ရအောင် ရုန်းကန်ကြိုးစားမှုဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ယုံကြည်မှုမျိုးကို ဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲ။ သင့်ဟာသင် ရလာတဲ့ ဗဟုသုတကနေသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Management Consultant Judit Barwick က အဲဒါကို ထောက်ခံပါတယ်။ သူက တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ယုံကြည်မှုဆိုတာဟာ အပြင်က အခြားလူတွေအပေါ်မှာ မှီခိုမယ့်အစား သင့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ အားသာချက်တွေကို လက်ခံခြင်း၊ သိခြင်းကနေ လာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Put Your Dream To The Test က သင့်ကို ကူညီနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကို ကောင်းစွာ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်းဖြင့် သင့်အိပ်မက်တွေကို ရယူတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ သင့်မှာ ရလာပါလိမ့်မယ်။
၅။ အချို့သောသူတွေဟာ သူတို့အိပ်မက်တွေကို စိတ်ကူး ပုံဖော်ကြည့်နိုင်စွမ်း မရှိကြခြင်း။
အိပ်မက်တွေကို လူတွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိကြသလဲ။ အိပ်မက်မက်ခြင်းကနေသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ အရမ်းကို ရိုးစင်းတယ်လို့ ထင်နိုင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ အိပ်မက်တွေ စတင်တဲ့နေရာပါပဲ။ စိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ခြင်းဟာ အိပ်မက်တွေကို တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ မြေဆီလွှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ စိတ်ပျက်အားလျော့စေတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက လာတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုယ်သင် စိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့သူလို့ ထင်တယ်ဆိုရင် မေ ျှာ်လင့်ချက်တွေကို မစွန့်လွှတ်ပါနဲ့။ သင့်အနေနဲ့ အဲဒါကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး အိပ်မက်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Dale Turner က ပြောပါတယ်။ အိပ်မက်ဆိုတာဟာ အသစ်လဲလှယ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ အသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ပဲ ရှိရှိ ကျွန်တော်တို့မှာ ဖွင့်မထုတ်ရသေးတဲ့ အလားအလာတွေ ရှိနေတုန်းပဲ ဖြစ်ပြီး လှပတဲ့ အနာဂါတ်တွေဟာ မွေးဖွားဖို့အတွက် စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ အိပ်မက်မက်ဖို့အတွက် နောက်ကျတယ်ရယ်လို့ လုံး၀ မရှိပါဘူး။
John C. Maxwell ရဲ့ အဆိုအရ အချို့သောသူတွေမှာ အိပ်မက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေ ထားရှိကြတတ်ပါတယ်။
(၁) လက်ရှိအလုပ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ နေ့ခင်းဖက်မက်တဲ့ အိမ်မက်တွေ
(၂) အစစ်အမှန်နဲ့ဝေးပြီး ဘယ်လို မဟာဗျူဟာမှ မပါပဲ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း အိုင်ဒီယာတွေနဲ့ စုထားတဲ့ လေထဲမှာ တိုက်အိမ်ဆောက်တဲ့ အိပ်မက်တွေ
(၃) ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ တွန့်ဆုတ်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဖြစ်စေတဲ့ မကောင်းတဲ့ အိပ်မက်တွေ
(၄) ကိုယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကြီးစိုးသူဖြစ်မှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေ
(၅) အခြားလူတွေဆီကနေ တဆင့်သာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့် တစ်ဆင့်ခံ အိပ်မက်တွေ
(၆) အခြားသူက သင့်ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်တာတွေပါတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ အိပ်မက်တွေ
(၇) အလုပ်အကိုင် အောင်မြင်မှုက သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မှုတွေပါတဲ့ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ အိပ်မက်တွေ
(၈) ရာထူး၊ နေရာ၊ ရရှိမှု တစ်ခုခုက သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ ခရီးပန်းတိုင်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အိပ်မက်တွေ
(၉) ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုဆန်တဲ့ အိပ်မက်တွေ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အိပ်မက်တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အိပ်မက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ သင်သိချင်မှာ သေချာပါတယ်။
John C. Maxwell ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်အရ အစစ်ဆေးခံနိုင်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုတာဟာ သင့်အနေနဲ့ အဲဒီအိပ်မက်ကို ရယူဖို့အတွက် ဘာကို မဆို လုပ်နိုင်လောက်အောင် သင့်ကို စိတ်ခွန်အားဖြည့်ပေးပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်၊ ဆန္ဒ၊ ခံစားချက်တွေကို ခွန်အားပေးတဲ့ စိတ်အားတက်ကြွစေသော အနာဂါတ်ပုံရိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ရယူသင့်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အလားအလာအတွက် အသေးစိတ်အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားတဲ့ စီမံချက်နဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်။
အိပ်မက်တွေဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ရှေ့ကို သွားစေတယ်။ အားအင်တွေ ပေးတယ်။ စိတ်အားတက်ကြွစေတယ်။ လူတိုင်းမှာ အိပ်မက်တွေရှိသင့်တယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေတဲ့သူတိုင်းမှာလည်း အိပ်မက်တွေ ရှိသင့်တယ်။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ သင့်မှာ ရယူထိုက်တဲ့ အိပ်မက်ရှိလား မရှိလား မသေချာဘူးဆိုရင် အဲဒါကို ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ လူတော်တော်များများဟာ အိပ်မက်မက်ဖို့အတွက် အားပေးခြင်း မခံကြရဘူး။ တစ်ခြားသူတွေကျတော့ မေ ျှာ်လင့်ချက်မဲ့နေပြီး အဲဒါတွေကို ဘေးမှာဖယ်ထားကြတယ်။
အခု စာဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ မိဘက တက်စေချင်လို့ ကိုယ်ဝါသနာမပါတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကို တက်ခဲ့ရတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ဦးလောက်ရှိမလဲ။ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်က အဆွယ်ကောင်းလို့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို မှားယွင်းစွာ စတင်မိခဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရှိမလဲ။ သင့်အသိတွေထဲမှာရော အဲဒီလိုလူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရှိမလဲ။ သင့်အနာဂါတ်အိပ်မက်တွေမှာရော ဆက်ပြီးတော့ လွဲမှားတဲ့ အိပ်မက်တွေကို ကြုံတွေ့ချင်လား။
အကယ်၍ သင့်ရဲ့ ကျန်ရှိတဲ့အနာဂါတ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ကို သိစေချင်တာကတော့ သတင်းကောင်းတစ်ခု ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ သင့်အိပ်မက်တွေကို မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်တွေကို ပြန်လည် ဆုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ ကြီးမားတဲ့ အိပ်မက်တွေ ဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် ရယူထိုက်တဲ့ အိပ်မက်တွေတိုင်းက ကြီးကို ကြီးမားရမယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ သင်လက်ရှိရှိနေတာထက် ပိုပြီး ကြီးမားနေဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
အကယ်၍ သင်လက်ရှိမက်နေတဲ့ အိပ်မက်က တကယ်မက်သင့်တဲ့ အိပ်မက်ဟုတ်၊ မဟုတ်ကို သိချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင်ဘယ်အိပ်မက်မျိုးကို မက်သင့်တယ်ဆိုတာ သိချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင်မက်နေတဲ့ အိပ်မက်ကို တကယ် ရယူနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတာ သိရှိချင်တယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ နံပါတ်တစ် ခေါင်းဆောင်မှု ကျွမ်းကျင်သူလို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ Dr.John C.Maxwell ရဲ့ Put Your Dream To The Test ကို အခြေခံ၍ U Naing Win Aung (Executive Coach) မှ သင်ကြားမယ့် အစီအစဉ်ကို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ပြီးရင် သင်ဘာတွေကို သိလာမလဲ
- သင့်အိပ်မက်က တကယ်ကို သင့်အိပ်မက်ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆန်းစစ်နိုင်မည်၊
- သင့်အိပ်မက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်အောင် မည်သို့ လုပ်သင့်သည်ကို သိရှိလာမည်၊ လက်တွေ့ကျသည် မကျသည်ကို သိရှိလာမည်၊
- သင့်တွင် သင့်အိပ်မက်ကို ရယူနိုင်မည့် မဟာဗျူဟာ ရှိ၊ မရှိကို လေ့လာလာနိုင်မည်၊
- သင့်အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သင်ဘယ်လိုလူတွေ သင့်ရဲ့ Team မှာလိုအပ်သည်ကို လေ့လာနိုင်မည်၊
- သင့်အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် မည်သို့ပေးဆပ်မှုတွေ လုပ်သင့်သည်ကို သိရှိလာမည်၊
- ဘယ်လို ဇွဲလုံ့လတွေ ထားရှိသင့်သည်ကို သိရှိလာမည်၊
- သင့်ရဲ့ အိပ်မက်က သင့်ကို ကျေနပ်စေခြင်း ရှိ၊ မရှိကို သိရှိလာမည့်အပြင် သင့်အိပ်မက်က အခြားလူတွေကို အကျိုးရှိစေခြင်း ရှိ၊ မရှိကိုပါ စစ်ဆေးလာနိုင်မည်။
သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားခြင်းဟာ သင့်ကိုယ်သင် ပေးနိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
“အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Leader ဟု ခံယူထားသောသူများ၊ Leader များ၊ Lead လုပ်နေသူများ မည်သူမဆို လေ့လာ ဆည်းပူးသင့်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် မိမိ၏ organization ကို ဦးဆောင်နေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ၏ယုံကြည်ချက်မှာ Leader ၊ Leadership ability ကို နှစ်သက်မိပါတယ်။ ဒီသင်တန်း တက်ရောက်ပြီး အမှန်တကယ် Ture Leader တစ်ယောက်ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေ သိလိုက်ရပြီး ကိုယ်ဘာတွေ လိုအပ်တယ်၊ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမယ် ကို ထင်ထင်ရှားရှား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလာရပါတယ်။ မိမိရဲ့ ခံယူ ချက်က Leadership သာလျှင် တိုးတက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။”
U Zayar Phyo
Techno Visions Co., Ltd.
“ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အထူးသင့်လျော်သောသင်တန်းကောင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိဘာကို လိုအပ်သည်ကို မိမိဘာသာ ဆန်းစစ်စေပြီး ဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးခြင်း၊ အလုပ်ကို ပိုမိုတန်ဖိုးထားလာပြီး ရပ်တန့်ခြင်းမရှိစေခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါသည်။”
U Min Khaung Soe
* လုပ်ငန်းကို နောက်တစ်ဆင့်ကို မြှင့်တင်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ
* စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခု စတင်လိုသူများ
* ဘဝရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုကို ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်လိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
Copyright © 2018 Breakthrough Company Limited Myanmar. All rights reserved. <developed by CloudSource Myanmar/>